October 2012 - နည်းပညာ
10/28/2012 08:40:00 AM ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
Adobe photoshop 7.0 လိုချင်တဲ.သူတွေအတွက်အလွယ်တကူ၇အောင်လို.တင်ပေးလိုက်ပါတယ် serialေ၇ာထည်.ပေးထားပါတယ်လိုချင်၇င်တော.အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါနော် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်
ဒီကို click ပြီး part 1 ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ
ဒီကို click ပြီး part2ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ
ဒေါင်းပြီး၇င် winrar နဲ.ဖြေလိုက်ပါ
ဒါကတော့လုပ်နည်းစာအုပ်ပါ ။ ။ebooks download(3.22 MB)
10/27/2012 06:33:00 PM ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
Adobe Premiere Pro software ပါ
Download: : mediafire
10/27/2012 06:16:00 PM နည်းပညာ No comments
Maggi ( hairstyle @ cosmetic) software
Download: :software download(3.22 MB)
10/27/2012 06:16:00 PM ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
10/26/2012 06:48:00 PM သိမှတ်ဖွယ်ရာ No comments
နောက်တစ်ခုက မိမိရဲ့အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ ပါသုံးပါ၊ ချာသုံးချာ၊ ကွာသုံးကွာ”
အဆင်ပြေချောမွေ့ စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေသော်................................။
10/23/2012 05:03:00 AM No comments
HOW TO ADD SIMPLE "BACK TO TOP" BUTTON TO BLOGGER
ဒီနေ့ထပ်ပြီးတင်တဲ့ ပို့(စ်)လေးက Simple "Back To Top" Button လေးပါ။ ဒီ Cond လေးတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ ကြိုက်ကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ လိုတာလေးတွေရှိရင်လည်း Google မှာ Sign In ၀င်ပေးပြီး Comment & Chat box တွေမှာ ဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ ကျနော်အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီသွားပါမယ်။
၃။ AddaGadget
၅။ အောက်က ပေးထာတဲ့ Cond လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။
<a style="display:scroll;position:fixed;bottom:5px;right:5px;" href="#" title="Back to Top"><img src="http://img140.imageshack.us/img140/5843/top1.png" /></a>
ထည့်ပြီးရင် Save ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ http://img140.imageshack.us/img140/5843/top1.png နေရာမှာ မိမိကြိုက်တဲ့ ပုံရဲ့ လင့်(ခ်) ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
အောက်မှာ Top Icon လေးတွေကို ပုံနှင့်တကွ လင့်(ခ်) လည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိကြိုက်ရာ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
10/23/2012 04:51:00 AM ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
FREE WEBS BOWSER
1. Avant Browser 2012 build 186, Released 10.11.2012
4. Google Chrome 17.0.938.0 Beta
5. Mozilla Firefox 8.0.1
6. Crazy Browser / Free Version : 3.1.0
File Size : 722.15 KB
10/18/2012 08:15:00 PM Virus No comments
Anti virus ကိုရှောင်တဲ့code